Inona No Nosiahan’ny (Tweet) Afrika Tamin’ny Taona 2015 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2016 9:53 GMT
Pikantsary tamin'ny fanehoana an-tsary mampiseho ny fomba fandefasan'i Afrika Sioka.
Nanadihady sioka hita ara-jeografika 1,6 miliara sy diezy malaza 5.000 tao amin'ny kaontinanta Afrikanina tamin'ny tatitra fahatelo “How Africa Tweets (Ahoana Ny Fisiokan'i Afrika)” ny Portland, sampam-pifandraisana iray ao Londra.
Ahitana tranga mampihetsi-po 12 mikasika ny fomba fitantaran'ny Twitter ny lohahevitra tahaka ny fampihorohoroana any Afrika, ny Ebola, sy ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny kaontinanta ny tatitra.
Nampiasa ny fitaovana fanadihadiana media sosialy Sysomos ny orinasa mba hanangonana sy hanadihadiana ireo diezy malaza 5.000. Na izany aza, tsy nahavita nanangom-baovao momba an'i Sodàna Atsimo sy ny Repoblikan'i Congo izy noho ny tsy fahampian'ny tahirin-kevitra tao amin'ny media sosialy.
Nampiseho ny fikarohana nataonay teo aloha fa mihoatra lavitra noho ny sehatra ho an'ny fifandraisana ara-tsosialy na ny vazivazy ny Twitter ao Afrika. Ity fikarohana fahatelo ity, dia mampiseho fa mivoatra ny sehatra ary anjakan'ny adihevitra matotra momba ny politika sy ny fitondram-panjakana, “voalaza tao anatin'ny fanambarana an-gazety i Mark Flanagan, Mpiara-miasa Voalohany amin'ny Portland mikasika ny Paikady Ara-votoaty sy Nomerika”.
Nizeria, Afrika Atsimo, Etiopia, Burundi sy Egypta no mavitrika indrindra amin'ny resaka ara-politika ao amin'ny Twitter.
Mihoatra ny sisintanim-pirenena ny fahalianana amin'ny politika. Anisan'ireo diezy sasany malaza indrindra sy niparitaka manerana an'i Afrika ny diezy momba ny fifidianana filoham-pirenena Nizeriana sy ny ady tao Burundi.
Ny teny anglisy no teny manjaka indrindra tao amin'ny Twitter ao Afrika. Tamin'ireo diezy malaza 5000 nohadihadianay, tamin'ny teny Anglisy avokoa ny 77%. Hita fa tsy dia be mpampiasa kosa ny teny tahaka ny Arabo sy ny Frantsay-izay 7% sy 4% avy.
Tsy dia ampiasaina amin'ny fanentanana ara-barotra tsy tahaka ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao ny Twitter any Afrika.
Ejipta no misioka betsaka indrindra amin'ireo firenena ao Afrika, izay 28% amin'ny totalin'ny Twitter hita ara-jeografika (tafakatra hatramin'ny sioka 500 tapitrisa). Nizeria (sioka 360 hita-ara-jeografika), Afrika Atsimo (sioka 325 hita ara-jeografika), Kenya (sioka 125 tapitrisa hita-ara-jeografika) ary Ghana (sioka 70 tapitrisa hita-ara-jeografika).
Rwanda irery no firenena nanana filoha ao anatin'ireo diezy folo malaza indrindra tao amin'ny Twitter.
Nizara ny fehin-kevitra tao amin'ny Twitter tami'nny diezy #HowAfricaTweets ny sioka sasany.
Noresahina tao amin'ny media sosialy talohan'ny fanambarana ofisialy nataon'ny fikambanana ara-pahasalamana (OMS) na ny olon-kafa ny tranga voalohany [nandrenesana indray] ny Ebola
Ny Afrikanina no naneho hevitra miavala indrindra momba ireo tranga vitsivitsy iraisam-pirenena tao amin'ny Twitter, anisan'izany ny Fanjakana Islamika,
Gabon dia firenena miteny Frantsay ao Afrika Afovoany, saingy nisy ifandraisany tamin'ny tranga tao Nizeria ny telo tamin'ireo siokany folo malaza indrindra.
Diezy dimy malaza indrindra tao Oganda
Ny nosy kelin'i Komoro no nanana taha avo indrindra tamin'ny sioka isan'olona amin'ny 0.77 manerana ny kaontinanta.
Nahazo fanehoan-kevitra tsara amin'ny ankapobeny ny tatitra. Na izany aza, Mwesigwa Daniel, mpandray anjara amin'ny True Africa nisioka hoe:
Ny tatitra #HowAfricaTweets dia sombiny hafa amin'ny laza mora vidy. Marobe ireo adino.
Demba Kandeh, mpanoratra ato amin'ny Global Voices nahita hoe:
@reedkramer @PortlandComms @twitter voka-pikarohana mahaliana; tahaka ny mampitaha paoma amin'ny laoranjy, #AfricaIsNotACountry #HowAfricaTweets
Izany no fikarohana faran’izay mahaliana! Koa, tena mangatsiatsiaka fa ianao no afaka manao izany Sysomos mampiasa ny fitaovana!
Sheldon, fiaraha-monina mpitantana ny Sysomos
(Masìna ianao mamela ny malahelo Malagasy, aho mampiasa Google Zavatra)
18 Avrily 2016, 22:13